မုဒိန်းမှုကို Youtube ပေါ်တင်ခဲ့သည့် GTC ကျောင်းသူလေး ~ Myanmar Forward
Fimware Android Application
Android Player Mobile Game
မုဒိန်းမှုကို Youtube ပေါ်တင်ခဲ့သည့် GTC ကျောင်းသူလေး အချစ်(လိင်)ဟာ ဆေးဝါး တစ်မျိုးပါ (အသက် (၁၈) ပြည့်မှ ဖတ်ပါ)
မုဒိန်းမှုကို Youtube ပေါ်တင်ခဲ့သည့် GTC ကျောင်းသူလေး Posted by drmyochit
Wednesday, December 19, 2012, under မှုခင်း | 111 comments
ဒီ အမှုကတော့ ၂၀၁၂ အစောပိုင်းလောက်က ဖြစ်ပါတတယ်။ ဇလွန်မြို့မှ မတရားပြု ကျင့်ခံရတဲ့ GTCကျောင်း ဆင်း မသင်းကြူကြူလှိုင်မှ သူမရဲ့ အဖြစ်အပြက်အား အတုယူနိုင်စေရန်အတွက် Youtube ပေါ်တွင် တင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဆိုပါ ဦးမင်းသီလဆိုသူဟာ ဇလွန်-ဓနုဖြူ မီးရထားတာဝန်ခံ AE ဆိုပြီး ကျောင်းဆင်း ကျောင်းသားတွေကို အလုပ်ရမယ်ဆိုကာ လိမ်လည် လိုက်ခေါ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်..။ GTC ကျောင်းဆင်း မသင်းကြူကြူလှိုင်နှင့် ကျောင်းသားများ အလုပ်ခွင် ရောက်သွားတဲ့ အခါမှာ လုပ်ငန်းခွင်မှ လူများက နင်တို့ ဘာလာလုပ်တာလဲ အဲဒီAE ကဒီမှာ အင်ဂျင်နီယာ ရိုးရိုးအဆင့်သာ ရှိတယ်ဆိုလို့ GTC ကျောင်းဆင်း ကျောင်းသား ၂ယောက်နှင့် ကျောင်းသူ ၄ယောက်တို့ မိမိတို့ဘာသာ အခန်းငှားပြီး အလုပ်ဆင်း ကြရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်..။ ဦးမင်းသီလဆိုသူမှ မသင်းကြူကြူလှိုင်အား အလုပ်ဝင်ပြီး ၂ရက်၊ ၃ရက်အတွင်း ချစ်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ သမီးရည်းစား ဖြစ်သည့် ပုံစံထွက်ဆိုသွားပြီး သမီး ရည်းစား အချင်းချင်း ကျူးလွန်ခဲ့သည့် ပုံသဏ္ဍာန် ဖြေဆိုထားပါတယ်..။ အပြည့်အစုံဖတ်ရန်- ဒီမှာ ပါ။ ဗီဒီယိုဖိုင်ကတော့.
2 January 2013 14:11:00 GMT+6:30
ဘာတွေမှန်းလဲမသိပြောနေတာ သိပ်မဟုတ်သလိုပဲနဂိုတည်းက အနေမှန်သင့်တယ်ထက်ထက်မြက်မြက်ရှိသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ် ညီမလေး
2 January 2013 15:54:00 GMT+6:30
ဆိုင်အပေါ်ထပ်ဆိုတည်းက . အော်လို့ ရပါတယ်ကွာ ... အစတည်းက မခံချင် ရင် လဥ ဒူးနဲ့ တိုက်ရတယ်. ခံတုန်းက ခံပီးမှ ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့... နားလိုက်တော့ ... Anonymous
2 January 2013 22:07:00 GMT+6:30
17 January 2013 00:04:00 GMT+6:30
10 March 2013 14:57:00 GMT+6:30
16 March 2013 15:58:00 GMT+6:30
အဲလိုမပြောသင့်ဘူးထင်တယ် မြန်မာလူမျိုးတွေ မဟုတ်ဘူးလား win zawoo
21 March 2013 11:11:00 GMT+6:30
21 March 2013 19:58:00 GMT+6:30
ဗမာ လူမျုိုးအချင်းချင်း ကိုယ်ချင်းစာတရား ထားကြပါ။ မိန်းကလေးဘက်က တစ်ကယ်စော်ကား ခံရလို့ internet မှာ တင်ထားတာပေါ့။ ခင်ဗျားတို့ ညီမတွေသာ အဲလို ဖြစ်ရင် ဘယ်လိုနေမလဲ။ ယောက်ျားကောင်းမှန်ရင် စကားကို ပေါ့ပြက်ပြက် မပြောကြပါနဲ့ ။
25 March 2013 15:07:00 GMT+6:30
26 March 2013 22:53:00 GMT+6:30
မြန်မာလူမျိုးတွေ မဟုတ်ဘူးလား Anonymous
2 April 2013 19:27:00 GMT+6:30
2 April 2013 19:32:00 GMT+6:30
2 April 2013 20:56:00 GMT+6:30
အင်တာနက်ပေါ်တင်ရဲတဲ့ မိန်းကလေးရဲ့သတ္တိကို လေးစားပါတယ်။
3 April 2013 11:34:00 GMT+6:30
3 April 2013 11:38:00 GMT+6:30
6 April 2013 08:14:00 GMT+6:30
ဒီလိုလုပ်တာအရမ်းကောင်းပါတယ်။လေးစားပါတယ်။ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းသွားစမှာ ဒီတရားခံ လူကြီးမင်းကို ပုံစံပေးကာလ သဘောတရားအရ ကောင်းကောင်းကြီးပုံစံပေးသင့်ပါတယ်။ဒါမှသာလျှင် နောက်နောင် company ဝန်ထမ်းမိန်းကလေးများရဲ့ဘဝ safe' ဖြစ်မှာပါ။နိုင်ငံခြားcompany တွေလဲ လာနေပြီဆိုတော့ သူတို့ကိုလဲ သတိပေးထားသလို ဖြစ်တာပေါ့နော်။ ကဲဥပဒေစိုးမိုးရေးအပိုင်းက တာဝန်ပဲကျန်တော့တယ်။ မိန်းကလေးဘက်ကတော့တာဝန်ကျေသွားပြီ။
9 April 2013 10:33:00 GMT+6:30
10 April 2013 00:41:00 GMT+6:30
12 April 2013 14:56:00 GMT+6:30
တစ်ခြားမိန်းကလေးတွေ သူလိုမဖြစ်ကြဖို့ အသိပေးတာပါ.. ကျေးဇူးတင်စရာပါ အဲဒီလူကိုလဲ ဥပဒေအရ အရေးယူလို့ရတယ် ပြစ်မှုပုဒ်မ ၄၁၇ နဲ့ညိစွန်းပါတယ်
13 April 2013 00:23:00 GMT+6:30
16 April 2013 09:11:00 GMT+6:30
ရင်ကြပ်လို့ဖက်ထားခိုင်းတယ်ဆိုတာအမှန်ဘဲလာ့း့့ နှုတ်ခန်းချငးစုပ်ခိုင်းတယ်ဆိုတာရောအမှန်ဘဲလာ့း့့့ အဲဒီထွက်ချက်ကအရေးပါတယ့့့့်  ကိုယ့်ဘက်ကမှန်ရင်ရေမြေဆုံးအောင်လိုက်ပါ့့့့ 
17 April 2013 23:25:00 GMT+6:30
17 April 2013 23:28:00 GMT+6:30
GTC ကသွေးတော့ရဲတာပဲ။ ဘာဖြစ်ဖြစ်ပါ ရှက်မနေနဲ့တင်သာတင်............ဒါမှနောက်လူတွေဆင်ခြင်နိုင်မှာ။
19 April 2013 17:12:00 GMT+6:30
19 April 2013 17:20:00 GMT+6:30
ကျွန်တော်၏မျှော်လင့်ချက်လေးပါ--- ကျွန်တော်ကရဲဝန်ထမ်းတစ်ဦးပါ၊ဘွဲ့ရပြီးမှရဲအခြေခံသင်တန်းတက်ပြီးမှအရာရှိဖြေရှင်အောင်မြင်မှုရာနှုန်းပြည့်ပဲလို့ယူဆခဲ့ပါတယ်--အခုတော့တကကဘ၀နဲ့ပဲရှိနေမှာပဲလား--- အရာရှိဖြစ်ဖို့အသက်လည်းကျော်ပြီ-- ကွန်ပျူတာဒီပလိုမာတက်ပြီးလက်မှတ်ရလာတော့ အရာရှိဖြေတဲ့နည်းစနစ်တွေကပြောင်း၊ကွန်ပျူတာလက်မှတ်ဘာမှအသုံးမ၀င်တော့ဘူးလေ--တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်ဓါတ်မကျဖို့ တင်ပြလိုပါတယ်--တကက (၃၅)နှစ်အောက်တွေအရာရှိ သင်တန်းခေါ်ပေးစေချင်တာပါပဲ--ကျွန်တော့်လိုပဲအရာရှိဖြစ်ချင်ပေမယ့် တကက ရာထူးနဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်သူတွေအများကြီးရှိနေမှာပါ- ကျွန်တော်အကြံပြုတင်ပြတာပါ
22 April 2013 12:15:00 GMT+6:30
22 April 2013 13:44:00 GMT+6:30
25 April 2013 19:49:00 GMT+6:30
မသိသူအတွက် ကတော့ ရင်လေးစရာပေါ့
25 April 2013 19:54:00 GMT+6:30
27 April 2013 16:50:00 GMT+6:30
ဟေ့ ကောင်တွေ အင်တာနက်ပေါ်ကိုတင်ပြီး အရှက်သိက္ခာကို မငဲ့ပဲ အများဆင်ခြင်နိုင်အောင် အသိပေးနိုင်တာ သူမကောင်းခဲ့ ၇င်တောင် အများအတွက် ကောင်းဖို့ တိုက် တွန်းပေးတာ မြန်မာအချင်ချင်း သနားညှာတာတဲ့စိတ်ကလေးထားပါ အမှားရှိခဲ့၇င်တောင် နောင်တ၇ခဲ့တဲ့ သူတယောက်လို့နားလည်ပေးနိုင်ကြပါ ကောင်မလေး မင်းဘက်က မှန်နေ၇င် ၇င်ဆိုင်၇ဲတဲ့ သတ္တိတွေ အပြည့် မွေးထားပါ...
28 April 2013 12:51:00 GMT+6:30
28 April 2013 15:32:00 GMT+6:30
နှမချင်း ကိုယ်ချင်းစာကြပါ မပာုတ်ပဲနဲကတော့ ကိုယ့်အရှက် ကွဲခံပြီး မတင်ပါဘူး၊၊၊၊၊၊၊ မင်းသီလ မင်းနှမတွေ သတိထားပါ၊၊၊၊၊၊
29 April 2013 21:21:00 GMT+6:30
30 April 2013 16:58:00 GMT+6:30
1 May 2013 11:41:00 GMT+6:30
1 May 2013 18:21:00 GMT+6:30
3 May 2013 13:01:00 GMT+6:30
4 May 2013 19:34:00 GMT+6:30
အားမလျှော့ နဲ့အချိန် တွေ အများ ကြီးကျန်သေးတယ်ကို့ယ့်ရည် မှန်းချက်း ကို ကိုယ်ဖြစ် အောင်လုပ် ပြီးအသက် ဆက်ရှင် ပါ အထူးသဖြင့် Tourish Guide လိုမျိုး ပေါ့ ဘယ်သူ့ မှ စိတ် ထဲ မထည့် ပဲနဲ့ ကြိူး စား ပြီး နေပါ(ကိုယ့် ရဲ့ ကံ ပဲ လို့မှတ် ယူ ပါ)
11 May 2013 15:41:00 GMT+6:30
11 May 2013 15:49:00 GMT+6:30
ဟေ့မင်းသီဟ မင်းသတိထားနေ ကျန်တဲ့သူတွေကလည်းမိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းမပြောနဲ့အားငယ်သူကိုအားပေးပါ
14 May 2013 10:34:00 GMT+6:30
14 May 2013 10:37:00 GMT+6:30
15 May 2013 00:12:00 GMT+6:30
15 May 2013 00:20:00 GMT+6:30
16 May 2013 19:58:00 GMT+6:30
16 May 2013 19:59:00 GMT+6:30
16 May 2013 20:05:00 GMT+6:30
17 May 2013 13:12:00 GMT+6:30
17 May 2013 13:16:00 GMT+6:30
21 May 2013 00:01:00 GMT+6:30
21 May 2013 08:46:00 GMT+6:30
24 May 2013 21:06:00 GMT+6:30
24 May 2013 21:15:00 GMT+6:30
24 May 2013 21:22:00 GMT+6:30
25 May 2013 08:12:00 GMT+6:30
ဒီအမှုက ကြာနေပြီ့့  Anonymous
27 May 2013 10:10:00 GMT+6:30
မိန်းခလေးတွေ အနေနဲအတုယူစေချင်တယ် ပညာတက်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ယုံရတယ်လို့ ဒေါသလည်းထွက်တယ် စိတ်လည်းမကောင်းဖူး
6 June 2013 11:02:00 GMT+6:30
ဖြစ်ပြီးသာကိုနောက်ထက်ထက်လိုက်သွားတာက ဘာသဘောလဲမသိဘူး မသိလို့ မေးတာနော် စိတ်မရှိပါနဲ့ကျန်နော်ဘယ်သူဘယ်သူမအပြစ်မပြောရဲပါဘူး
6 June 2013 22:08:00 GMT+6:30
မိုး ပျံအောင်တော်နေပါစေမိန်းမဟာမိန်းမဘဲလိုမြန်မာမိန်းကလေးတွေသိသင့်တယ် မိန်းမတွေမန်တက်မနေနဲ့နမူနာယူကြဟေ့
6 June 2013 23:46:00 GMT+6:30
15 July 2013 16:32:00 GMT+6:30
17 July 2013 21:43:00 GMT+6:30
28 July 2013 12:32:00 GMT+6:30
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နောင်လာမယ့်အနာဂတ်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ
30 July 2013 22:27:00 GMT+6:30
အားပေးနေပါတယ်။ဆက်ကြိုးစားပါ။အောင် နိုင် ပါစေ
30 July 2013 23:29:00 GMT+6:30
Sponcer ​ခေတ်​ကြီးထဲမှာစီး​မျော​နေတဲ့အဓိကက​တော့ ရန်​ကုန်​မှာရှိတဲ့​ကောင်​မ​လေး​တော်​​တော်​များများဟာကိုယ့်​အစွမ်းအစနဲ့ကိုယ့်​ပညာနဲ့မကြိုးစားချင်​ကြ​တော့အခုလို​ကြောင်​ခံတွင်းပျက်​ကြီး​တွေနဲ့​တွေ့ကြတာ​ပေါ့။စိတ်​မ​ကောင်းပါဘူးညီမ​လေးရယ်​...မင်းကိုနှစ်​သိမ့်​​ပေးတဲ့သူ​တွေအများကြီးပါ။​ရေခြား​မြေခြားမှာသာအခုလိုဖြစ်​ခဲ့ရင်​ဘ၀က သုညပါပဲ
4 August 2013 03:52:00 GMT+6:30
5 August 2013 01:38:00 GMT+6:30
အဖုတ် ထဲ လီး ဝင် သွား တော့ ဘယ် လို ခံ စား ရ လဲညီ မအ ကို လိုး ဖူး တာတော့ ကောင်း တယ်ဘယ် လို အ ရ သာ နဲ့ မှ မ လဲ နိုင် ဘူး ညီ မ အ ဖုတ် မ ပြဲ လောက် သေး ပါ ဘူးပထမ အ ချီ အ လိုး ခံ ရ တဲ့ အ ရ သာ ကို ညီ မသိ ပြီ နော်နတ် ပြည် ရောက် သွား သ လို ဘဲ ခံ စား ရ မှာ ပါ
6 August 2013 12:26:00 GMT+6:30
စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့အစ်မ လူ့ဘဝမှာလူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် အမှားဆိုတာရှိမှာပဲဒီအမှားကိုသင် ခန်းစာယူပြီး ငါဘယ်လိုဆက်နေထိုင်ရမယ်ဆိုတာကို စဉ်းစားပါ ဆုံးဖြတ်ပါ ဆင်ခြင် ပါ လူ့ဘဝတိုတောင်းပါတယ်အစ်မရဲ့ကျန်တဲ့အချိန်တွေကို ဥာဏ်ပညာရှိစွာနဲ့ အောင်မြင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ
8 August 2013 12:11:00 GMT+6:30
8 August 2013 12:14:00 GMT+6:30
18 August 2013 17:36:00 GMT+6:30
31 August 2013 00:09:00 GMT+6:30
31 August 2013 00:10:00 GMT+6:30
31 August 2013 00:11:00 GMT+6:30
2 September 2013 13:42:00 GMT+6:30
12 September 2013 21:12:00 GMT+6:30
မဖြစ်သင့်ဘူးထင်ပါတယ် ကိုယ့်ဘာသာရှောင်ပေါ့ ဖြစ်ပြီးမှဘာမှလုပ်လို့မရဖူးလေ အခုတင်လိုက်တော့သူများအပြောခံရတော့မှာပေါ့
16 September 2013 12:18:00 GMT+6:30
16 September 2013 15:55:00 GMT+6:30
sate ma kg bu sister.d problem ka phyt pyi ma top ba lo ma pyin lo ma ya top bu .sate nyit ma nay par nea sister.wod kyee lo pall save like par .sister..........
18 September 2013 17:22:00 GMT+6:30
21 September 2013 21:43:00 GMT+6:30
27 September 2013 12:49:00 GMT+6:30
မြန်မာမေ ကောအစစ်ဟုတ် ရဲ့လား
30 September 2013 16:15:00 GMT+6:30
30 September 2013 16:22:00 GMT+6:30
30 September 2013 16:36:00 GMT+6:30
29/9 /2013/ ဒီလိုမျိုးဖြစ်စဉ်ပဲမွန်ပြည်နယ်ကျိုက်မရောမြို့နယ်၊ပိန်းနဲကုန်းကျေးရွာမှာအသက်(၇၀)အဘိုးအိုတယောက်အသက်(၆)နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်တဦးကိုမုန့်ကျွေးမယ်ဆိုပြီးအိမ်ခေါ်သွားတယ်အိမ်ရောက်မှမိန်းကလေးငယ်ကိုမုဒိန်းကျင့်တယ်ကလေးမလေးကဘာမှမသိရှာပဲနာပြီးငြိမ်ခံနေတာပေါ့နောက်မှကလေးသွားတာကြာပြီဆိုတော့လိုက်သွားကြည့်တယ်လေကလေးပေါ်မှာကလေးကိုမုဒိန်းကျင့်မလို့လုပ်နေတာရွာသာလာပြီးတယောက်တချက်ထိုးပစ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရဲစခန်းကိုတော့အမှုဖွင့်ထားတယ်လူကြည့်ရင်ရိူးရိုးယဉ်ယဉ်စိတ်ကတော့တဏှာရူးထနေတယ်၊သင်ခန်းစာပါဗျာလောကကြီးမှာယူတတ်ရင်ပညာပါအားလုံးသင်ခန်းစာယူနိုင်ကြပါစေ....ဒါကြောင့် ဘုရားကပါပသ္မိံရမတိမနော၊တဲ့စိတ်တွေဟာမကောင်းတဲ့နေရာမှာမွေ့လျော်တတ်တယ်နော်သတိထားနိုင်ကြပါစေကုန်.................
10 October 2013 13:34:00 GMT+6:30
13 October 2013 20:45:00 GMT+6:30
သနားလည်းသနားတယ် မသနားလည်းမသနားဘူး သနားတယ်ဆိုတာကလူကို မသနားဘူးဆိုတာက စောက်ဖုတ်ကို ရိုင်းတယ်ထင်ရင်လည်း so sorry Anonymous
15 October 2013 22:04:00 GMT+6:30
မတင်သင့်ဘူး ကိုယ်ပဲအရှက်ကွဲတာပေါ့ အပေါ်မှာဝင်ရေးတဲ့ခွေးကောင်တွေ မင်းညီမ အစ်မတွေအဲ့ လိုမဖြစ်ပါစေနဲ့
19 October 2013 16:55:00 GMT+6:30
25 October 2013 23:13:00 GMT+6:30
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အစားမတော် ၁လုပ်/အသွားမတော် ၁လှမ်းတဲ့ မိန်းကလေး တွေ ပိုစင်ကြဉ် ရမယ်
26 October 2013 14:22:00 GMT+6:30
2 November 2013 22:41:00 GMT+6:30
ဖင်ခံတုန်းက ခံပြီး.GTC တက် ပြီး ဒါလေးတောင် မ သိ ဘူး တဲ့
4 November 2013 12:25:00 GMT+6:30
6 November 2013 21:26:00 GMT+6:30
7 November 2013 09:46:00 GMT+6:30
11 November 2013 15:06:00 GMT+6:30
16 November 2013 08:20:00 GMT+6:30
သက်ဆိုင်ရာတွေကဘာလုပ်နေတာလဲ..ဒီအတိုင်းပြီးသွားရမှာလား.နှမတွေမရှိကြဘူးလား..ဒီအတိုင်းပြီးရင်တော့..နောက်ကိုမကြာခဏဖြစ်တော့မှာမလွဲဘဲ..မင်းတို့သားသမီးတွေထိမှမင်းတို့သိမယ်...အခုလိုအင်တာနက်ပေါ်တင်တာဖြစ်သင့်ပါတယ်..မြန်မာမ်ိန်းကလေးတွေ..မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်ရှေ့ရုပြီတော့..အရှက်တရားကိုဘေးဖယ်ကာ..အသိပေးခဲ့တဲ့ညီးမလေး.ဘာမှအားမငယ်နဲ့..မကောင်းမုပြုကြတဲ့လူတွေဆီကို.မကောင်းတာတွေအလုံးအရင်းသွားလိမ့်မယ်..ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တရားတော်တွေကိုမမေ့ပါနဲ့..မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကို..အောက်မေ့ပါသတိရပါ..အဆိုးထဲကအကောင်းကိုတွေရအောင်တရားနဲ့ရှာပေါ့..မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ခြင်္သေ့ အောက်မှာ အမှန်တရားတွေရှိတယ်တိုဘာဆိုလိုတာကိုသိမှာပါ...အားလုံးသိပါစေ..
21 November 2013 04:42:00 GMT+6:30
25 November 2013 17:30:00 GMT+6:30
ဆိုင်ပေါ်တက်သွား တာဂျင်းဘောင် ဘီနဲဇလွန်မှာ အော်ရင် ရုန်းရင် မကြားရလောက်အောင်ကြီးတဲ့ ဆိုင် ရှိလားလျှော်ကြေး သိန်းလေး ဆယ်တောင်းသေးလားကြားမိလိုမေးကြည်တာပါ
25 November 2013 21:12:00 GMT+6:30
arakanhertage11@gmail.com....................အပျိုလေးတွေစောက်ခွက်ယားနေတဲ .ကောင်မလေးတွေ ဖာသည်မလေးတွေ ဇယားတွေ အလိုးခံချင်ရင်အပ်လိုက်ပါ
30 December 2013 19:02:00 GMT+6:30
စိတ်​​တော့ မ​ကောင်းပါဘူး။ဒါ​ပေမယ့်​ ...အလိုမတူဘဲ ဖြစ်​တယ်​ဆိုတာကို​တော့ မယုံပါဘူး။ Anonymous
2 January 2014 01:31:00 GMT+6:30
သူပြောတာနဲ့ ငါတို့ ကျောင်း သိက္ခာကျတယ်
9 January 2014 11:07:00 GMT+6:30
စား​သောက်​ဆိုင်​အ​ပေါ်ထပ်​မှာ လုပ်​တာ လူပြတ်​တဲ့​နေရာမှာ လုပ်​တာမှ မဟုတ်​တာ ​အော်​ပါလား ... ဒီလူ တကယ်​ယုတ်​မာတယ်​ဆို အဲဒီက ထွက်​လာပီး ကတဲက ​ပြေးပီးတိုင်​ပါလား ။ ဘာလို့​နောက်​တခါထပ်​လိုက်​သွားလဲ .... အခု Statement နဲ့ အမှုတည်​​ဆောက်​တာ အားမရှိ​တော့ဘူး ... လုပ်​ချင်​ရင်​လဲပီပြင်​​အောင်​လုပ်​​လေ ... အခု​တော့ နှစ်​ခါ ဂွမ်းတာ​ပေါ့...
16 January 2014 20:50:00 GMT+6:30
26 January 2014 08:34:00 GMT+6:30
31 January 2014 16:48:00 GMT+6:30
31 January 2014 16:50:00 GMT+6:30
24 March 2014 01:31:00 GMT+6:30
2 April 2014 10:04:00 GMT+6:30
မှန်တယ်ဗျာ သူတို့နှမတွေသာဖြစ်ရင်အဲဒီလိုပြောကြမှာလား စောက်ရူးတွေ
Hein Nay Zaw
11 April 2014 14:41:00 GMT+6:30
21 April 2014 03:06:00 GMT+6:30
This is False Story...
18 August 2014 15:07:00 GMT+6:30
18 August 2014 15:08:00 GMT+6:30
ကေအိုင်အေတို့ အသေအပျောက်မရှိသေးသည့် ဘွမ်တောင်နှင့်...
ကျပ်နှစ်သိန်းနှင့် နှစ်သိန်းခွဲတန် မိုဘိုင်းဖုန်းမ...
ဘင်္ဂလီအရေးအတွက် လွှတ်တော်အတွင်း ဦးရွှေမောင်၏ အဆိုတင်သ...
မြန်မာ့တပ်မတော်၏ ကချင်စစ်ရေးအတွက် ပြင်ဆင်လုပ်ဆောင်...
မြန်မာများ ဆန္ဒပြ ဆူပူဖို့၊ ထိုင်ခုံရဖို့ လုနေချိန်...
အာဖဂန် နစ္စတန် နိုင်ငံ၌ ဗုံးပေါက်ကွဲ မိန်းကလေး ၁ဝ ဥ...
မြန်မာနိုင်ငံမှ ဒုက္ခသည်များဟု ဆိုသည့် ပင်လယ်ထဲမှ လ...
3 trusted friendsဖြင့် Facebook အကောင့်ယူနည်း နှင့...
မြန်မာ့တပ်မတော် ခလရ(၁၀)ကျဆုံးမှု အကြောင်း ကေအိုင်အေ...
ကေအိုင်အေတို့ ဖော်ပြသည့် စစ်ဆင်ရေး စီမံချက်ဆုံးရှုံ...
မုဒိန်းမှုကို Youtube ပေါ်တင်ခဲ့သည့် GTC ကျောင်းသူလေ...
“လူကုန်ကူးခံရသူ ၄ဦးအား ခက်ခက်ခဲခဲကယ်တင်”
လူကုန်ကူးသည့် ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်အမျိုးသမီး အား လက်ရ...
မွန်ပြည်နယ်အတွင်း လိုင်စင်မဲ့မော်တော်ယာဉ်များ ဖမ်း...
ဖမ်းဆီးထားသူတွေကို လွှတ်ပေးဖို့ ရဟန်းပျို အဖွဲ့က တေ...
ဖြစ်လာနိုင်သည့် အပြင်းထန်ဆုံး စစ်ဆင်ရေးအတွက် KIAြ...
ကေအိုင်အေသည် အထောက်အပံ့ကောင်းစွာ ရရှိနေကြောင်း ဖော...
မြန်မာပြည် မြောက်ပိုင်း ထာဝရ တည်ငြိမ်အေး ချမ်းစေရန...
NLD ပါတီမှ မျိုးရန်နောင်သိမ်းအား မဘသအဖွဲ့(ဗဟို)မှ သဘောထား ထုတ်ပြန်
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကြီးအမှန် တကယ်ရှိမရှိ လာမည့် ၂၆ရက်တွင်အတည်ပြုနိုင်မည်
From : .. UD
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း အမှန် တကယ်ရှိမရှိဆိုသည်နှင့်ပတ်သက် ၍ ယခုလ ၂၆ရက်မှသာအတည် ပြုနိုင်မည်ဟု ခေါင်းလောင်းဆယ် ယူရေးအထောက်အကူပြုဆပ်ကော် မတီမှ ဒုဥက...
RCSS/SSA အဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းကြား ဆက်ကြေးငွေ အလွဲသုံးစားမှု ပြဿနာ ဖြစ်ပွား
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ ကျိုင်းတောင်းမြို့နယ်ခွဲအတွင်းရှိ သစ်စက်များနှင့် ပရိဘောဂ အလုပ်ရုံ များဆီမှ ကောက်ခံထား...
ဆိုးလ်−တောင်ကိုရီးယားနာမည် ကျော် သရုပ်ဆောင်မင်းသား လီ မင်ဟိုက အလုပ်များလွန်းသော ကြောင့် ချစ်သူရည်းစားထားရန် အချိန်မရှိကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ ဘေဂျင်းမြို့၌ြ...
''ဒီစနစ်မှာ ငါဟာ နွားကြီးပဲဆိုတာ ပိုပေါက်လာတယ်’’ (သူရဦးတင်ဦး)
ကျနော်က စာတွေပေတွေ မဖတ်ဖူးဘူး။ စစ်စာတွေပဲ ဖတ်ဖူးတယ်။ အမှန်အတိုင်း ပြောရရင် ဥပဒေမေးရင် သိတယ်။ ကျနော်တို့က တိုတို...
ချင်းတွင်းမြစ်ရေစိုးရိမ်မှတ် ရောက်နေ၍ ကုန်းမြင့်ဒေသများမြေပြိုနိုင်
ရန်ကုန်- မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ဒေသများတွင် မိုးအားကောင်းနေပြီး ချင်းတွင်းမြစ်ရေ စိုးရိမ်ရေမှတ် အထက် သို့ ရောက်ရှိနေသော ကြောင့် ကုန်းမြင့်ဒေသများမြေပြို...
အနာဂတ်ရွေးကောက်ပွဲများတွင် တစ်မဲအသာ ရသူအနိုင်ယူစနစ်မှ အချိုးကျကိုယ်စားပြုစနစ် (ပီအာရ်) ပြောင်းလဲကျင့်သုံးရန် လွှတ်တော်များ၏ စီစဉ်မှုကို သွေးရူးသွေးတန်း ထောက်...
သီးသန့် စီးပွားရေးဇုန် မိုင် (၂၀၀) အထိ စိုးမိုးနိုင်သော တပ်မတော်(ရေ)
မြန်မာ့တပ်မတော် (ရေ)သည် ပင်လယ်ပြင် စိုးမိုးရေးတာဝန်များကို ထမ်းဆောင် နေရာတွင် ကမ်းနီး ၀င်ရောက်၍ ငါးခိုးဖမ်း နေသော ကမ်းဝေး ရေယာဉ်များ သာမက
မိုင်လေဆိုင်းရပ်စ်ရဲ့ ဆုကို ကိုယ်စား လက်ခံယူခဲ့သူ အိမ်ခြေမဲ့ လူငယ်ကို ရဲက ဖမ်းဆီးဖို့ လိုက်ရှာနေတယ် လို့ တိုင်းမ် မဂ္ဂဇင်း သတင်း တပုဒ် မှာ ရေးထားပါတယ်။ ...
ချင်းပြည်နယ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် နေ့ စားလပေး ကျောင်းဆရာ/မ (၃၀) ကျော်သည် ယနေ့ ချိန်အထိ ၎င်းတို့တာဝန်ကျ သည့် ဒေသသို့ ရောက်ရှိ နိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့် လာမည...
ဘိလပ်မြေစက်ရုံမှူးက ကျူးကျော်အဆောက်အဦများ အမြန်ဆုံးဖယ်ရှားရန် အကြောင်းကြားစာပေးပို့
သြဂုတ် ၂၇ရက်၊ ၂၀၁၄ခုနှစ်။ နန်းချောင်ဖော့ ဖားအံမြို့နယ်၊ မြိုင်ကလေးကျေးရွာရှိ မြန်မာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း၏ တန် ၉၀၀ထွက် အမှတ်(၁) ဘိလပ်မြေစက်ရုံပိုင်နယ်ေ...